Ny fampidirana ORCID ao amin'ny OSF, ScienceOpen ary Zenodo amin'ny alàlan'ny AfricaArXiv - AfricaArXiv
Ny fampidirana ORCID amin'ny OSF, ScienceOpen ary Zenodo amin'ny alàlan'ny AfricaArXiv
navoakan'ny Jo Havemann on 27T Febroary 2020 27T Febroary 2020
ORCID ary ny AfricaArXiv dia miara-miasa mba hanampy ireo siansa afrikana handroso ny fikarakarana azy amin'ny alàlan'ny mpamantatra azy manokana. Ny ORCID dia manohana ny AfricaArXiv ary mandrisika ireo mpahay siansa afrikanina - ary tsy siantifika afrikana izay manao lohahevitra momba ny lohahevitra afrikanina - hizara ny valim-pikarohana nataony ao amin'ny kitapom-bokatra Open Access, na amin'ny sehatra elektronika malalaka azo alain-tahaka.
Amin'ny maha-fotodrafitrasa midadasika kokoa ny mpikaroka ny mizara vaovao amin'ny sehatra manerantany, ny ORCID dia manome fifandraisana mangarahara sy azo itokisana eo amin'ny mpikaroka, ny fandraisana anjara ary ny fifandraisany amin'ny fanomezana Solon'anarana (URI https izay manana isa 16 isa izay mifanaraka amin'ny ISO Standard ISO 27729) ho an'ny tsirairay hampiasa ny anarany rehefa miditra amin'ny fikarohana, ny mari-pahaizana ary ny asa fanavaozana manerantany.
Vakio bebe kokoa momba izany ny firafitry ny ORCID iD.
Ny AfricaArXiv dia manome sehatra maimaim-poana ho an'ny mpahay siansa afrikanina hampiditra ireo sora-tanana efa nomaniny, ireo sora-tanana ekena (lahatsoratra vita pirinty), ary ireo boky navoaka. Raha manao izany isika dia miara-miasa amin'ny Ivotoerana ho an'ny siansa misokatra, Zenodo, ary ScienceOpen, samy mametraka fitahirizan-kevitra izay ahafahan'ireo siantifika afrikanina apetraka sy aparitaka ny valiny amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny vondron'olona AfrikaninaArXiv. Ireo repoblika telo rehetra dia nampiditra ny rafitra sy ny ORCID ary namela ny mpahay siansa mba tsy hisoratra amin'ny fomba tsy miangatra, hisoratra anarana ary hanavao ny angon-dry zareo amin'ny rakitsary ORCID.
Amin'ny alàlan'ity fiaraha-miasa ity dia mikendry ny mpahay siansa afrikanina hanoratra anarana ho an'ny tenifototra ORCID manokana izy ireo mba ho fantatra manokana, mifandraika amin'ny asany ary mandray anjara ary maneho ny zava-bitan'izy ireo amin'ireo andrim-pikarohana, mpamatsy vola ary mpamoaka.
Soraty ny ny ORCID iD
Efa manana IDID ve i ORCID? Lazao anay ny zavatra niainanao.
Mifandraisa aminay raha misy fanontaniana na fanehoan-kevitra: info@africarxiv.org.
Raha mila fanazavana fanampiny sy tari-dalana momba ny ORCID dia mandehana support.orcid.org.
Momba ny ORCID
ORCID dia fikambanana tsy mitady tombontsoa manampy amin'ny famoronana tontolo iray izay ahafantarana ireo rehetra mandray anjara amin'ny fikarohana, ny mari-pahaizana ary ny fanavaozana ary mifandraika amin'ny fandraisany anjara sy ny fifandraisan'izy ireo, manerana ireo foto-kevitra, sisintany ary fotoana. | orcid.org
Ny AfricaArxiv dia natokana hanafainganana haingana sy hanokafana fikarohana sy fiaraha-miasa ho an'ny mpahay siansa afrikanina ary manampy amin'ny famolavolana ny ho avin'ny fifandraisana manerantany. Ireo sora-tanana vita an-tsoratra mialoha sy endrika hafa napetraka ao amin'ny sehatra AfricaArxiv dia mamela ny fanaparitahana maimaimpoana sy haingana ary ny fifanakalozan-kevitra eran'izao tontolo izao momba ny valin'ny fikarohana afrikana.
Sokajy:	Open AccessOpen sciencePublishing
suscipit felis ante. Curabitur consectetur velit, adipiscing